Isbeddelka Itoobiya saameyn ma ku yeelan karaa Soomaaliya? - Caasimada Online
Home Warar Isbeddelka Itoobiya saameyn ma ku yeelan karaa Soomaaliya?
Isbeddelka Itoobiya saameyn ma ku yeelan karaa Soomaaliya?
Dhawaan ayaa waxaa is casilay ra’iisulwasaaraha dalkaasi, waxa ayna aaminsan yihiin dad badan in Soomaaliya saameyn aan wanaagsaneyn ay ku yeelan karto xaaladda ka taagan Itoobiya. Prof, Axmed Maxamed ayaa arintani ka hadlay waxa uuna yiri:
Dr Xasan Sheikh Cali oo ka faalooda arrimaha ammaanka ayaa ka warramay saameynta ay Itoobiya ay ku yeelan karto Soomaaliya waxa uuna yiri: